Ravatomanga sy Rajoelina : Diso kajy -
AccueilRaharaham-pirenenaRavatomanga sy Rajoelina : Diso kajy
21/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noho ny tahotra hiatrika ny fifidianana fihodinana faharoa, dia nolotoin’i Mamy Ravatomanga, sy Andry Rajoelina, ary nalaina baraka tamin’ny alalan’ireo tompomenakeliny i Mbola Rajaonah, Filoha mpanorina, sady Tale jeneralin’ny RLM Communication. Tsaho sy lainga maro mantsy no naelin’ireto mpamita-bahoaka ireto tamin’ireo haino aman-jeriny tamin’iny raharaha iny.
Nolazaina fa lasa nandositra noho ny tahotra ny fihainoana azy teny amin’ny BIANCO. Natao dridrangilo tamin’ireo haino aman-jerin’izy ireo ihany koa fa nandà ny fiantsoana azy, ka hosamborina ity Filoha mpanorina, sady Tale jeneralin’ny RLM Communication ity. Voaporofo anefa ankehitriny fa fafy lainga sy fanakorontanana ny saim-bahoaka fotsiny no natao tamin’ireny haino aman-jery ireny. Natrehin’i Mbola Rajaonah avokoa mantsy ireo fiantsoana roa niantaona nataon’ny BIANCO azy. Tsy nisy endrika tahotra na kely akory aza nasehony, na nialohan’ny fidirany nanaovana ilay fihainoana, na tamin’ny fotoana nivoahany teny amin’ny foibe toeran’ity sampana mahaleo tena miady amin’ny kolikoly ity. Ny BIANCO, izay nanatanteraka ny asany araka ny lalàna nandritra izay roa andro izay.
Mazava be fa resaka politika maloto, sy fampihorohoroana, ary fanalam-baraka rano fotsiny no tao ambadik’iny raharaha iny. Tsy levon’ny vavonin’i Andry Rajoelina sy Ravatomanga Mamy mantsy ny fanohanan’i Mbola Rajaonah an’i Marc Ravalomanana, tamin’izao fifidianana izao, ka nataon izy ireo ny fomba rehetra nentina nandemena azy. Nampiasaina avokoa ireo ramatahora rehetra nentina nanosehana ity mpandraharaha eto amin’ny firenena ity handositra tany ivelany, ahafahana manao tantely afa-drakotra ireo fananana nohariany, toa izay nanaovana ny an’ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin’ny 2009. Tsy nahomby anefa ny tetika, ka diso avokoa ireo kajikajy rehetra. Eto, ary mbola hijanona eto mantsy ilay olona nolazaina fa tsy teto intsony.